Xildhibaano kaga dhawaaqay Nairobi Madal ay ku midaysanyihiin ku dhowaad 100 mudane.
arlaadi May 14, 2017 No Comments
Dowlada cusub ee madaxweyne Farmaajo iyo xukuumada raisalwasaare Khayre ayaa mudada ay jiraan aanay weli gaarin 100 cisho aysana jirin eed weyn oo durba dusha looga tuuri karo balse arin sanadihii u dambeeyay siyaasada Soomaaliya ku asteysnayd ayaa durba ka bilaabatay magaalada Nairobi.
Nairobi waa halka ay xildhibaanada mooshin doonka ahi ku shiraan kuna sameystaan isbaheysi waana mida hada dhacday ee ah inay xildhibaano gaaraya 88 kaga dhawaaqeen magaaladaas madal ay ugu magac dareen Horusocod, dabcan in horay loo socdaa waa mid wanaagsan balse su’aasha is weydiinta u baahan ayaa ah, ma waxa ay isku diyaarinayaan mooshin keenis iyo inay mucaaradad cusub ku furaan dowlada aan weli caga dhigan ee is toos toosiska ku jirto?
Xildhibaanada ku dhawaaqay madasha cusub ayaa waxa ay gudoomiye u doorteen Cabdirashiid Xidig oo sanadihii u dambeeyay ka mid ahaa xildhibaanadii iyo wasiirada soo maray dalka una tartamay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada ayaa qorshohoodu waxa uu yahay sidii ay ugu xuub siiban lahaayeen xisbi mucaaradeed oo ka dhex sameysma baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaga oo sidoo kalena damacsan inay mucaaradad ku furaan xukuumada hada jirto.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa bal waxa ay ku dhaqaaqaan xildhibaanadaan oo weli ku howlan dhismaha Madasha iyo soo dhameystirida hogaankeeda.